Faux Fur dedday, Faux Fur kaarbadka, Faux Sheepskin dedday, dedday Dhogor - Wenwen
Shiinaha saaridda Daad dhab Australia ...
Raaxo jiilaalka kartoo Real Long Fur Sheepsk ...
decoration Home Sheepskin faux dedday dhogorta iyo adinba High ...
Fashion bey'ada iibiyay kulul handmade saaxiibtinimo rooga dhogor
barkin jilicsan White longue chaise Sheepskin ...
Sheepskin jumlada Australia isku waslad dhan s ...
Real jaro Dhogor Cad koollo Kursiga Baabuurka Sheepskin
Sheepskin Real Kursiga Baabuurka Dhogor
Universal Full Set Long Fur Sheepskin Car Kursiga ...
size Large dhogor cad lambskin macmal dheer ...
dhar Brygge A u eg dhogorta xayawaanka ah ee. Villi kala qaybsan yihiin laba lakab, lakabka sare waa iftiin iyo qaro weyn reeyaa si toos ah, lakabka hoose waa u wanaagsan oo jilicsan fiber gaaban. dhogorta Artificial waxaa caadi loo isticmaalaa geliyey jubbado, Lining dharka, koofiyadaha, Katiinado, alaabta lagu ciyaaro, joodariyaasha, qurxinta gudaha, iyo Gogol. Hababka wax soo saarka ka mid ah tolida (tolida weft, tolida dunta fidsan iyo tolo) iyo jare. Habka tolida weft tolida waa koraya ugu dhaqsiyaha badan oo ugu ballaaran ...
The shaabadood strip quwad mid noocee ah wax, taas oo aan u fududahay in la furo, oo waxaa kaalin ku leeyahay nuugista lama filaan ah, biyuhu, ningax dhawaaqa, ningax kulaylka, ka hortagga boodh, oo u qardarin. Shaabadood ka samaysan yihiin caag, waraaqaha, birta, caag ah iyo qalab kale oo badan. Tan iyo 1980, ka strips seal caag ayaa codsatay in ay baabuurta, albaabada iyo daaqadaha, armaajooyinka, qaboojiyaha, weelasha iyo warshadaha kale. Sida laga soo xigtay shuruudaha warshado kala duwan, oo ay ka sameeyeen gaar ah ...
biraha ku Highway
biraha wadada wuxuu ka kooban yahay laba biraha bir jiingado iyo labadii tiir inaytaagnaan demisay u dhexeeya labada. Labada posts waxaa demisay u dhexeeya laba biraha bir jiingado. Marka jidka weyn waa in hawlgalka caadiga ah, biraha ah si fudud loo gashan karaa godka galinta pre-rakibay furitaanka si ay u ilaaliyaan oo ka jaraan biraha ka baxsan wadada. Waa labis iyo qurux. Marka gaadiidka duqeeyo la, sababtoo ah biraha ay steel jiingado ayaa imp wanaagsan ...
Color guddiga dahaarka
Cái Tuban, sidoo kale loo yaqaan saxan midabka, saxan midabka. midab dahaarka saxan bir ka samaysan yahay saxan bir qabow-giringiriyey iyo saxan bir galvanized sida substrate ah, sakhiray in ay soo baxaan pretreatment (maaddooyinka, nadiifinta, daaweynta beddelidda kiimikada), dahaarka by (hab daahan rullaluistemadka) a hab joogto ah, la dubay oo la qaboojiyey Products . The saxan bir dahaarka leeyahay miisaanka iftiin, muuqaalka quruxda badan iyo iska caabin ah daxalka wanaagsan, iyo in si toos ah looga baaraandegi karaa. Waxay bixisaa nooc cusub oo ah alaabta ceeriin ...
Sida laga soo xigtay tirakoob ka Hebei qodniinka- Industry ururka, laga bilaabo Janaayo ilaa February 2018, dakhliga ugu weyn ee ganacsiga birta ee Gobolka Hebei ahaa 156.106 billion yuan, koror of 5.03% sanadkii-on-sano, xisaabiyenimo 27.67% ka mid ah gobolka ayaa ugu muhiimsan dakhliga ganacsiga warshadaha; faa'iido ahaa 9,84 billion. Yuan, koror of 53,76% sanad-on-sano, xisaabiyenimo 30,47% faa'iidada warshadaha gobolka. In muddo January-February ah, dakhliga ganacsi ma ugu weyn ...